Mutambo “Waisakanganwika” Wakauya Panguva Yakakodzera | Kubva Mudura Renhoroondo Yedu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“WAISAKANGANWIKA!” Iwayo ndiwo matsananguriro aiita vakawanda mutambo wainzi “Creation Drama.” Wakauya panguva yakakodzera uye vaya vaiuona vaisamboukanganwa. Chokwadi, mutambo uyu wakabatsira chaizvo pakuita kuti Jehovha arumbidzwe nguva pfupi hurumende yaHitler isati yatanga kutambudza chaizvo vanhu vaMwari muEurope. Asi “Creation Drama” yainge yakaita sei?
Mutambo wacho mutsva wakapiwa zita rebhuku rinonzi Schöpfung (Creation)
Muna 1914 hama dzokumuzinda wevanhu vaJehovha kuBrooklyn, New York, U.S.A., dzakabudisa “Photo-Drama of Creation.” Uyu waiva mutambo wemaawa masere waiva nemasiraidhi nefirimu rine ruvara, nziyo nemanzwi. Mutambo uyu wakaonekwa nevanhu vane mamiriyoni pasi pose. Muna 1914 pakabudiswawo mutambo wainzi “Eureka Drama” wainge wakafanana ne“Photo-Drama” asi uri mupfupi. Asi pakazosvika makore ekuma1920, masiraidhi, mafirimu, nemichina yaishandiswa zvainge zvasakara chaizvo. Kunyange zvakadaro vanhu vainge vachiri kuda kuona “Photo-Drama.” Somuenzaniso, vagari vomuLudwigsburg, muGermany, vaibvunza kuti, “‘Photo-Drama’ icharatidzwazve rini?” Chii chaigona kuitwa?
Kuti mutambo wacho uratidzwezve, mumakore ekuma1920, vamiririri vemhuri yeBheteri yaiva muMagdeburg, muGermany, vakatenga mafirimu kukambani yaiita zvenhau muParis, muFrance, uye masiraidhi kumakambani aiita zvemifananidzo muLeipzig neDresden. Izvi zvakabatanidzwa nemasiraidhi e“Photo-Drama” ainge achiri kushandisika.
Hama Erich Frost, nyanzvi pakuridza mimhanzi, vakanyora mumhanzi wokushandisa pamwe nemafirimu acho nemasiraidhi. Mamwe mashoko aitaurwa mumutambo wacho akatorwa mubhuku redu raCreation. Ndokusaka mutambo uyu wainge wakafanana ne“Photo-Drama” wakapiwa zita idzva rokuti “Creation Drama.”
Mutambo uyu mutsva wainge uri wemaawa masere kufanana ne“Photo-Drama,” uye wairatidzwa chikamu nechikamu manheru akatevedzana. Waitaura mashoko anobata pfungwa emazuva okusika, waitaura nezvenhoroondo yeBhaibheri uye zvakaitika zvenyika, uye wairatidza kuti chitendero chenhema chainge chatadza kubatsira vanhu. “Creation Drama” yakaratidzwa muAustria, Germany, Luxemburg, neSwitzerland, uye kune dzimwe nzvimbo kwaiva nevanhu vaitaura chiGerman.
Erich Frost nemanotsi ake emumhanzi we“Creation Drama”
Erich Frost akatsanangura kuti: “Pairatidzwa mutambo uyu, ndaikurudzira vamwe vangu, kunyanya vandairidza navo mumhanzi, kuti panguva yokuzorora tipinde mumutsetse wega wega tichipa vateereri mabhuku edu akazonaka netubhuku. Takagovera mabhuku akawanda nenzira iyi kupfuura ataigona kugovera paimba neimba.” Johannes Rauthe, uyo aironga kuti mutambo wacho uratidzwe muPoland nenyika yava kunzi Czech Republic, anoyeuka kuti vakawanda vaiona mutambo wacho vaisiya kero dzavo kuti vazoshanyirwa. Kero idzodzo dzakabatsira pakushanyazve zvinobudirira.
Kusvika kuma1930, pose pairatidzwa “Creation Drama” vanhu vaizara munzvimbo dzacho, uye mumaguta iwayo vanhu vaingotaura nezveZvapupu zvaJehovha. Pakazosvika 1933, vanhu vanenge miriyoni vainge vaona mutambo uyu wairatidzwa nebazi rokuGermany. “Kuti tinongoona Mutambo wacho,” anoyeuka kudaro Käthe Krauss, “pamazuva mashanu awairatidzwa, zuva rega rega taifamba makiromita 10 kuenda chete, nomumasango uye mumakomo nemipata.” “‘Creation Drama’ ndiyo yakaita kuti ndizofarira chokwadi,” anodaro Else Billharz.
Alfred Almendinger anorondedzera kuti amai vake pavakanoona mutambo uyu, “vakafara chaizvo zvokuti vakatenga Bhaibheri uye vakatsvaga shoko rokuti ‘purigatori.’” Sezvo vakarishaya muBhaibheri, vakarega kuenda kuchechi uye vakabhabhatidzwa. Erich Frost anoyeuka kuti: “Vanhu vakawanda vakawana chokwadi nemhaka ye‘Creation Drama.’”—3 Joh. 1-3.
Panguva iyo vanhu vakawanda chaizvo vaiona “Creation Drama,” muEurope bato reNazi rainge rava kutsigirwawo chaizvo uye richikonzera matambudziko. Kutanga muna 1933, basa reZvapupu muGermany rakarambidzwa. Kubvira panguva iyoyo kusvikira pakapera hondo yenyika yechipiri muna 1945, vashumiri vaJehovha muEurope vakatambudzwa chaizvo. Erich Frost akapedza makore anenge masere akasungwa. Asi akapona uye akazoshanda paBheteri muWiesbaden, Germany. Zvinofadza chaizvo kuti mutambo usingakanganwiki we“Creation Drama” wakauya panguva yakakodzera kuti ushingise vaKristu vakawanda chaizvo vainge vava kuda kutambudzwa muHondo Yenyika II!—Kubva mudura renhoroondo yedu muGermany.